Nkpuchi ihu nke ihu, Silicone Laryngeal Mask, Disposable Face Mask - Shanyou
Guzobe na 2002, Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. anọwo na-arụpụta ọgwụ mgbochi ọrịa na ngwaahịa ndị nwere ike iku ume. Anyị na-amalite na-emepụta Ihe nkpuchi ihu na PPE site na February 2020 n'ihi ntiwapụ nke ọrịa ọrịa corona. Gbaara na OA, ISO13485 na FDA, anyị ụlọ ọrụ arụ ezigbo aha ọma n'etiti ndị ahịa anyị si mba 50 dị ka Germany, USA na Japan, wdg Hangzhou Shanyou brand “ ỌR. “A na-eto ebe niile site na iji ihe dị elu.
Nkpuchi ihu ihu, pịnye m
Nkpuchi ihu ihu, Idị IIR (Nkpuchi ihu ihu)
Nzacha Ọkara Masks FFP2, CE0598
Nzacha Ọkara Masks FFP2, CE2163
Kpọtụrụ anyị maka ịlele ọba egwu
Laboratorylọ nyocha ahụ na-ekpuchi 500m2, nke nwere ụlọ ọrụ nyocha zuru ezu maka Medical Face Masks na FFP2, FFP3 mask.
Na nzuko ahụ, anyị malitere usoro ihe nkpuchi, dịka ọmụmaatụ, ihe mkpuchi ihu ahụike, ihe mkpuchi ihu ihu, Nzacha Ọkara Masks, wdg.
Ihe nkpuchi na nchedo onwe onye nke oma
Masgba ihe nkpuchi bụ ụzọ dị mkpa iji gbochie ọrịa iku ume. Mgbe ị na-ahọrọ ihe nkpuchi, anyị kwesịrị ịghọta okwu ahụ bụ "ahụike". A na-eji ihe nkpuchi dị iche iche eme ihe na ebe dị iche iche. A na-atụ aro ihe mkpuchi ihu nwere ike iji mee ihe na ebe ndị mmadụ na-ejupụta; Ihe nchedo nke nkpuchi ogwu ogwu di nma karie nke nkpuchi aru aru. Akwadoro ka ndi mmadu ...
Kedu ihe eji eme ihe mkpuchi ahụ ike?
Mkpokọta ọgwụ na-abụkarị usoro atọ (nke a na-ekweghị), nke a na-eji akwa abụọ nke spunbonded non-kpara akwa ejiri maka ọgwụgwọ na ahụike, na-agbakwunye otu oyi akwa n'etiti etiti abụọ ahụ, nke emere nke ngwọta sprayed na-abụghị kpara akwa na ihe karịrị 99,999% filtration na mgbochi nje site ultrasonic ịgbado ọkụ. Atọ oyi akwa ire ere nke mkpuchi ihu: elu oyi akwa ...